Taariikhda astaanta Burger King | Hal-abuurka khadka tooska ah
Shaki kuma jiro taas Burger King waa shirkad ka mid ahayd bulshadeena muddo dheer oo dheer. Laakiin maxaad ka taqaanaa taariikhda astaanta Burger King? Mararka qaarkood, dib u eegida noocyada caanka ah ee muddada dheer waxay kaa caawin kartaa inaad abuurto mashruuc, ama si fudud u barato waxyaabaha lagu beddelay naqshadaynta garaafyada si loo hagaajiyo astaanta.
Xaaladdan oo kale Waxaan diiradda saari doonaa taariikhda Burger King waxaadna ogaan doontaa waxa ay calaamadahoodii ugu horeysay ahayd iyo sida ay isu bedelayeen sanadihii la soo dhaafay oo ay noqdeen kuwa hadda jira, taas oo kor u qaadaysa aqoonsigooda muuqaal ahaan isbeddelka moodada iyo sidoo kale horumarinta bulshada. U tag?
1 Goorma ayaa la abuuray Burger King?
2 Taariikhda astaanta Burger King waa horumarka "nolosheeda"
2.1 Astaantii ugu horeysay ee Burger King
2.2 Isku daygii labaad in uu soo baxo
2.3 1957kii waxa uu ahaa sannadkii isbeddelka
2.4 Sanadkii kacaanka
2.5 1994-tii oo la sameeyay weji
2.6 Dib-u-abuur cusub
2.7 Waxaynu ku noqonaynaa 1994kii
Goorma ayaa la abuuray Burger King?
Lama odhan karo Burger King wuxuu lahaa waddo laami ah oo ay ka buuxaan ubaxyo maadaama aysan ahayn. Taariikhda ugu horreysa ee muhiimka ah ee taariikhdeeda waa 1953.
Waqtigaas waxaan joognaa Jacksonville, Florida, halkaas oo Insta Burger King laga sameeyay magaalada.
Si kastaba ha ahaatee, sanad ka dib, shirkadu uma muuqato mid si fiican u socota waxayna bilaabeen dhibaatooyin dhaqaale. Markaa laba ganacsade, David Edgerton iyo James McLamore, waxay iibsadaan shirkadda si ay dib ugu bilaabaan. Taasna, go'aanka ugu horreeya ee ay gaadhaan waa inay magacooda ku soo gaabiyaan Burger King.
Laakiin xitaa magacaas lama beddelin "Habaarkii Burger King" ma saamayn doonto iyaga. Iyaga oo keliya ma aha, laakiin dhammaan kuwii soo maray, midba midka kale ka dib. Waxa la odhan karaa Burger King waxa uu lahaa “aabayaal” badan ilaa kii ugu dambeeyay, kooxda Caalamiga ah ee Brands Restaurant.
Taariikhda astaanta Burger King waa horumarka "nolosheeda"
Anigoo maskaxda ku haya dhammaan arrimaha kore, taasi shaki kuma jiro taariikhda astaanta Burger King ma noqon doonto mid gaaban. Waxay beddeshay calaamadeeda marar badan, inkasta oo laga soo bilaabo 1969 ay ilaalinaysay saldhigga oo kaliya ayaa lagu sameeyay taabasho iyo "waji-qaadid". Laakiin sidee bay noqotay? Aan aragno horumarkiisa.
Astaantii ugu horeysay ee Burger King
Si aan u ogaano astaanta koowaad ee astaantan waa inaan tagnaa maalintii la sameeyay, taas oo ah, 1953. Sida aad xasuusan doonto, Magaciisu wuxuu ahaa Insta Burger King, Laakin calaamadeeda ereyga "Insta" kuma soo muuqan.
Waa a isotype, taas oo ah, qoraalka Burger King iyo, korkiisa, qorrax aad mooddo inay soo baxayso. Baahnayn in la sheego, dhammaan waxay ahayd cawl.
Abuuraha, waxay ahayd hab tilmaamaya in cuntada degdega ahi ay korayso waxayna ahayd bilow, inkasta oo ay wali bilaabantay, waxay noqon doontaa mid muhiim ah.
Laakiin halkaas ayay ku hadhay.
Isku daygii labaad in uu soo baxo
Sannadkii xigay, markii Edgerton iyo Mclamore la wareegeen, waxay go'aansadeen kala bixi qorraxda, iyo ereyga Insta. Taas awgeed waxay u sameeyeen calaamad macnaha dhabta ah ee ereyga. Waxaan ula jeedaa, waxay isticmaaleen Burger-King. Waa kaas.
Farta waxa ay ahayd mid geesinimo leh oo leh geeso raf ah, laakiin aan lahayn wax qurxin ah.
1957kii waxa uu ahaa sannadkii isbeddelka
Midabkii baa yimid. Iyo sidoo kale tixraac tarjumaadda iyo macnaha dhabta ah ee magaca. Sidee tahay calaamaddu?
Hagaag, aan u tagno qaybo. Marka hore waa in aan Boqor fadhiyey oo koob weyn oo cabitaan ah wata (caws ka mid ah). Waxa uu ku fadhiyaa hamburger waxana uu ku tiirsan yahay calaamada Burger King iyo gunta hoose ee akhriya Hoyga Whopper.
Oo waxaas oo dhan midabka.
Waa calaamad kakan, oo leh walxo badan oo ay tahay inaad eegto, oo cajiib ah marka loo eego dhammaan kuwii hore ee aan aragnay ilaa hadda. Laakiin waxay samaysay isbeddel iyo waxay iibiyeen: hamburgers iyo cabitaannada.
Ma ahayn mid xun, iyada oo la tixgelinayo in ay haysteen 12 sano.
Waana in 12 sano ka dib, 1969-kii, uu yimid isbeddel, lagana yaabo in kan ugu shabaha kan hadda jira maadaama oo ay ku guuleysteen in ay dhawr jeer wax ka beddelaan.
Sidee tahay Markaa qiyaas bunka hamburger. Hagaag, gaar ahaan laba midab oo jaale ah ama kareem midab leh oo bur ah hamburger. Iyo, dhexda, ereyga Burger (iyo xariiqda xigta) King. Hagaag, taasi waa astaanta ay sameeyeen taariikhdaas.
Xaaladdan oo kale, ayaa typography ayaa siisay muhiimad ka badan ereyga King halkii Burger (kaas oo lahaa xoogaa kayar. Sidoo kale, waxa uu ahaa weji fargeeto ah oo wareegsan, oo casaan ah.
Waxay ahayd sumad aad u cajiib ah wakhtigaas waana mid aad loo jecel yahay sababtoo ah sida ay qaybteeda ula xidhiidho astaanta. Runtuna waxay tahay in taariikhdaas laga bilaabo wax yar is beddeleen (marka laga reebo mar ay "lax madow" soo baxday).
1994-tii oo la sameeyay weji
Haysashada astaanta ay hore u lahayd 1969-kii, kiiskan 1994-kii ayay go'aansadeen beddelo qoraalka qoraalka Burger King oo ka dhig mid dheellitiran, oo leh xarfo adag iyo midab dhalaalaya, casaan xoog leh oo oranji ah. Tani waxay ka dhigtay in ay sii muuqato.
Sannadkii 1999-kii calaamaddu waxay samaysay isbeddel cusub oo ku saabsan astaanta. Kiiskan waxaa laga soo wakiishay wakaaladda Sterling Brands iyo, in kasta oo ay saldhigga ilaalinayeen, taas oo ah, bunka hamburgerka iyo magaca dhexda ku yaal, waxay siiyeen saamayn firfircoon. Mid ka mid ah, waxay sameeyeen rootiga u muuqda mid mug leh. Intaa waxa u dheer in ay xarfaha aad u ballaadhiyeen, ilaa heer ay ka soo baxeen roodhidii. Ugu dambayntiina waxay ku dareen bilaha buluuga ah, oo ka dhumuc weyn xagga sare.
Dhab ahaantii, sumaddani waxay noqon kartaa midda aad xasuusato laakiin maaha tan hadda, sababtoo ah 2021 mar kale ayay beddeleen.
Waxaynu ku noqonaynaa 1994kii
Ma xasuusataa summada aan kuu sheegnay 1994kii? Hagaag, marka laga reebo dhowr tweaks, waa astaanta in 2021 ay dib u isticmaaleen mar kale.
Waana tii ay rabeen sii "retro" iyo taabashada dareenka shirkadda. Dhab ahaantii, waxa la yidhi waa sii socoshada tii 1969-kii laakiin waxaynu aragnaa inay aad ugu xidhan tahay tii 1969. Waxa kaliya ee ay ku kala duwan yihiin kan waa in dhammaantiis lagu sameeyay xudduud cawl oo cad.
Hadda oo aad ogtahay taariikhda astaanta Burger King, kee baad door bidaysaa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Taariikhda astaanta Burger King